Touchy ဘာသာရပ်: ဂိမ်းနှင့် virtual reality များအတွက်အောင်မြင်မှုများ - သတင်း Rule
Touchy ဘာသာရပ်: ဂိမ်းနှင့် virtual reality များအတွက်အောင်မြင်မှုများ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Touchy ဘာသာရပ်: ဂိမ်းနှင့် virtual reality များအတွက်အောင်မြင်မှုများ” Will Freeman ကကရေးသားခဲ့သည်, သောကြာနေ့ 1st အပေါ် Observer မေလများအတွက် 2015 06.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
virtual reality ဆုပ်ကိုင်ဖို့ခက်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်
ဂိမ်း developer များလက်ရှိကဲ့သို့သော hardware အတွက်တည်ဆောက်သောနက်ရှိုင်းကို virtual-အဖြစ်မှန်အတွေ့အကြုံတွေကိုခုနှစ်တွင် Oculus Rift, အမြင်အာရုံနဲ့ aural သညာဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်ရှိနိုင်ပါသည်. သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အဖြစ်စုပ်ယူအဖြစ်, တဦးတည်းသဘော၏မရှိခြင်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကြီးအာရုံကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်. VR ကမ္ဘာထဲမှာ, နှင့်ပင်သာမန်ဂိမ်းတွေအတွက်, ကျွန်တော်တို့မရှိသလောက်ကိုထိဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိနေကြသည်, ခံစားရရန်. တုံ့ပြန်ချက် ကျော်လွန်. တုန်ခါမှုမှတဆင့်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်သိသိသာသာခက်ခဲသည်.
သို့သော်တစ်ဦး Bristol ကပညာရပ်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းအတွက့်အက်ကွဲကြပေမည်
Ultrahaptics ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်နှင့်ကုမ္ပဏီ CTO ဖြစ်သူတွမ် Carter ကတစ်ဘွဲ့ကြိုစီမံကိန်းကိုစဉ်အတွင်းဘဝကိုစတင်ခဲ့. တစ်ဦးပါရဂူဘွဲ့နှင့်အများကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတဆင့်, Carter ကနဲ့သူ့အဖွဲ့ကိုသင်ခံစားမိနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုငျသောပါးလွှာသောလေထုထဲတွင် 3D ပုံစံမျိုးစုံတညျဆောကျတဲ့နညျးလမျးပဋိသန္ဓေယူပြီ.
ultrasound Scan ဖတ်စက်များတွင်အသုံးပြုမျိုး - - ထိုကစားသမားများ၏ရှေ့မှောက်၌အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံမျိုးစုံစီမံကိန်းအား Ultrahaptics နည်းပညာကိုသေးငယ်တဲ့ ultrasonic စပီကာနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားတဲ့ LP ထက်မပိုကြီးတဲ့ဇယားကွက်ကိုအသုံးပြုသည်. အဆိုပါအဖွဲ့သည်လက်ရှိသင်ခံစားမိနိုငျသောအသံလှိုင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်, 3D dial လှုပ်ရှား, သို့မဟုတ်၏ပင်ဂိမ်းတစ်ခု Pong သငျသညျဘောလုံးကိုသင့်ရဲ့လက်ဖဝါးကိုချွတ်တိုးပွားလာခံစားရဘယ်မှာ.
သင်တို့မူကားမဆိုအချိန်မကြာမီတစ်ဦး ultrasound မြို့ရိုးပေါ်မှာမြှောင်မည်မဟုတ်ပါ
Ultrahaptics နည်းပညာကိုလုပ်ကိုင်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်, နှင့်အတွေ့အကြုံမှအတော်လေးတုန်လှုပ်စေသော. သို့သော်ပုံသဏ္ဍာန်လေကြောင်းကနေဖန်ဆင်းတော်, အလွန်မြင်သာထင်သော်လည်း, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောများမှာ. ultrasound မှ built တစ်ဦးကကျောက်ခက် VR ပတ်ဝန်းကျင်သေးတဲ့အဖြစ်မှန်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့တ္ထု Ultrahaptics သငျသညျကို virtual အဖြစ်မှန်အတွင်း၌မထိဖို့ခွင့်ပြုကြောင်း, ထိုကဲ့သို့သောတကျွန်းတနိုင်ငံသားအာကာသယာဉ်အတွက်လေယာဉ်မှူးအခန်းမှာအင်အားလယ်ကွင်းသို့မဟုတ်ခလုတ်အဖြစ်, အရမ်းများမှာ.
Ultrahaptics သူတို့ရဲ့နည်းပညာကိုအိမ်တွင်အသုံးပြုမြင်ရဖို့မျှော်လင့်, ထိုကဲ့သို့သောသင်၏လက်၌အစာအာဟာရနှင့်ဖုံးလွှမ်းကြသောအခါထို cooker ထိန်းချုပ်အဖြစ်. touchable သံကိုတစ်ကားဒိုင်ခွက်အဘို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်, ခလုတ်များအတွက် fumbling drivers တွေကိုရပ်တန့်ဖို့.
20055	0 အပိုဒ်, အင်္ဂါရပ်များ, အားကစားပြိုင်ပွဲ, လေ့လာသူ Tech မှလစဉ်, ရူပေဗဒ, သိပ္ပံ, နည်းပညာ, အဆိုပါ Observer, အလိုတော် Freeman က
← 20 အကောင်းဆုံး Android apps နှင့်ဂိမ်းများယခုအပတ် 80s နည်းပညာများအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုကိုင်ကြာအဖြစ် ZX Spectrum နောက်တဖန် beeps →